WINE 6.0-rc2 inosvika iine mashoma gadziriso mukugadzirira kutanga | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mokunge kuburitswa svondo rapfuura, WineHQ yadzoka kuzosvika panguva seyakagara uye yatanga WAINI 6.0-rc2. Ramba uchifunga kuti maRC haana kunyatso kufanana nemamwe mavhezheni ekuvandudza ayo anoburitsa vhiki mbiri dzese, sezvo ivo vachisvika kana vhezheni yacho iri padhuze, asi vachiri mavhezheni ekutanga. Iyi chaiyo rc2 yauya kupolish zvishoma zvakaburitswa mazuva manomwe apfuura, asi zvishoma kwazvo zvichienzaniswa nezvakaburitswa pane dzimwe nhambo.
Muchokwadi, iyo rc1 yakauya neinopfuura 450 shanduko, nepo WINE 6.0-rc2 yakangounza zvigadziriso makumi mana uye 64 kuchinja, peccata minuta kana tikachienzanisa nemazana maviri kana kuti iwo anowanzo sanganisira. Zvinoshamisawo kuti panguva ino ivo havana kusanganisira chero hunyanzvi sehunoshamisira, kunyangwe 3-4 iyo inowedzerwa "zvakagadziriswa zvakasiyana". Kana kwete, kana tikaverenga izvo zvavakawedzera se "zvitsva."
WINE 6.0-rc2 inosanganisira chete kugadzirisa
Sezvatinoverenga pakutanga kwe kusunungura chinyorwa, iyi vhezheni inosanganisira bug gadzirisa chete sezvavanenge vari mukodhi inotonhora. Iwo mafiriza, ayo muChirungu anowanzo kunzi "Feature / Code Freeze", ndiyo yavanodaidza iyo nguva iyo isingatenderwe kuwedzera shanduko, kunze kwekunge ivo vachipuruzira izvo zvavakange vatowedzera mune zvekare shanduro.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.0-rc2 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y uyu mumwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo yakagadzikana vhezheni yeWINE 6.0 ichasvika munajanuary.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.0-rc2 inosvika iine mashoma marekisheni kugadzirira kusunungurwa kwakatsiga